Awstaria: 'Cunto fudud oo CBD ah' oo ka socota Mashiinka Iibinta • Daroogada Inc.eu
Awstaria: 'Cunto fudud oo CBD ah' oo ka timid mashiinka wax iibinta
Xagga xashiishadda iyo CBD horumarku aad buu u socdaa. Awstaria, waxaa jira mashiinno wax iibiya oo cbd ah oo waddada dhinaceeda ah, sidaa darteed macaamiisha ayaa sidoo kale la siiyaa cbd cunto fudud inta ay jidka ku jiraan. Hanf-shop waa alaab-qeybiye weyn oo leh in ka badan 100 mashiinno iibinta hemp.
Mashiinnada wax iibinta waxaa ku jira hemp iyo alaabada CBD oo laga soo saaray beero ahaan la xaqiijiyay oo dadku ka bixi karaan mashiinka hawo qaboojiyaha 24 saac maalintii. Sidoo kale waxtar u leh dalxiisayaasha.
1 Hemp la qaboojiyey oo kululaa
2 Cadee sharciyada iyo qawaaniinta CBD iyo xashiishadda
Hemp la qaboojiyey oo kululaa
Waad ku mahadsan tahay qaboojinta isku dhafan iyo kululaynta, alaabada hemp waxay ku jiraan heerkul sax ah sannadka oo dhan. Tani waa xaalad lagu dammaanad qaadayo tayo wanaagsan oo joogto ah oo ubaxyada hemp ah. Waad ku mahadsan tahay guddiyada iftiinka cagaaran ee LED -ka, mashiinnada wax lagu iibiyo sidoo kale way sahlan yihiin in la helo habeenkii. Shuruucda iyo qawaaniinta ku xeeran cannabinoids waxay ku kala duwan yihiin waddan kasta. Natiijo ahaan, sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn xagga horumarka waddan walba. Nederland ayaa si walaac leh aad uga dambeysa marka loo eego Switzerland, Poland iyo Austria waxayna ku hanjabtay inay aad uga sii dambeyso.
Cadee sharciyada iyo qawaaniinta CBD iyo xashiishadda
Si loo sii horumariyo beerta hemp iyo xashiishadda, waxaa loo baahan yahay sharciyo iyo qawaaniin cad. Dhab ahaan sidoo kale marka la eego soo dejinta iyo dhoofinta alaabada cbd iyo xashiishadda. In kasta oo Ameerika iyo Kanada ay hormuud u yihiin sharciyeynta, horumarinno cusub, sharciyeynta iyo soosaarka farsamada sare ee hemp iyo cannabis, qaybo ka mid ah Europa aad uga yara adag. Luxembourg waxay sanado badan ka shaqeyneysay siyaasadeeda xashiishadda Nederlandna waxay si aad ah ugu dhagan tahay siyaasad dulqaad oo aad u gabowday iyada oo aan qaadin tallaabooyin waaweyn. Iyada oo imtixaanka xashiishadda ee guuldaraysanaya uu yahay sida keega.
Daryeelka maqaarka ee CBD dhab ahaantii ma caawin karaa dhibaatooyinka maqaarkaaga iyo maqaarkaaga sanadka 2021?
Lama dafiri karo in warshadaha maqaarka ee caalamiga ah ee CBD ay kobcayaan. Xashiishadda xashiishka ...
Maalinta Hurdada ee Caalamiga ah: CBD runti kaa caawin kartaa dhibaatooyinka hurdada?
Haddii hurdo xumo kaa haysato, nasiib darro keligaa ma tihid. Mareykanka oo keliya ...